Vaovao - Inona ny atao hoe Gallium Nitride?
Gallium Nitride dia semiconductor bandgap mivantana mivantana III / V izay mifanaraka tsara amin'ny transistors mahery vaika afaka miasa amin'ny hafanana ambony. Hatramin'ny taona 1990 dia nampiasaina matetika tamin'ny diode emitting light (LED) izy io. Gallium nitride dia manome jiro manga ampiasaina amin'ny famakiana disk amin'ny Blu-ray. Ankoatr'izay, ny nitrida gallium dia ampiasaina amin'ny fitaovana herinaratra semiconductor, singa RF, laser ary photonics. Amin'ny ho avy, ho hitantsika ny GaN amin'ny teknolojia sensor.
Tamin'ny 2006, ny transistors GaN FET, izay nantsoina matetika hoe GaN FETs, dia nanomboka namboarina tamin'ny alàlan'ny fampitomboana sosona GaN manify amin'ny takelaka AIN amin'ny fisaka silika mahazatra amin'ny alàlan'ny fametrahana setroka etona simika (MOCVD). Ny sosona AIN dia miasa ho toy ny buffer eo anelanelan'ny substrate sy GaN.
Ity dingana vaovao ity dia nahafahan'ny transistors gallide nitride azo namokatra tao amin'ireo ozinina efa misy toy ny silikika, ary nampiasa ny fizotran'ny famokarana saika mitovy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana dingana fantatra, io dia mamela ny vidin-tsolika ambany sy ambany ary mampihena ny sakana amin'ny fananganana ny transistors kely kokoa miaraka amin'ny fampivoarana be fivoarana.
Mba hanazavana bebe kokoa, ny fitaovana semiconductor rehetra dia manana ilay antsoina hoe bandgap. Ity dia angovo angovo ao anaty matevina izay tsy misy electrons misy. Raha tsorina, ny bandgap dia mifandraika amin'ny fahaizan'ny fitaovana matanjaka mitondra herinaratra. Gallium nitride dia manana bandgap 3,4 eV, raha oharina amin'ny bandgap 1.12 eV an'ny silikone. Ny elanelan'ny tarika Gallium nitride dia midika fa mahazaka voltages ambony sy mari-pana ambonimbony kokoa noho ny MOSFET silicon. Ity bandgap malalaka ity dia ahafahan'ny nitrida gallium ampiharina amin'ny fitaovana matanjaka sy mahery vaika optoelectronic.
Ny fahafaha-miasa amin'ny maripana avo kokoa sy ny voltages avo lenta kokoa noho ny transistors gallium arsenide (GaAs) dia mahatonga ny gallium nitride hampitombo hery mahery vaika ho an'ny fitaovana microwave sy terahertz (ThZ), toy ny sary sy ny fahatsapana, ny tsena ho avy voalaza etsy ambony. Eto ny teknolojia GaN ary mampanantena izy fa hanatsara ny zava-drehetra.